Gmail မှာ attachment file တွေကို တပြိုင်နက်တည်း အများကြီး select ပေးပြီး attach လုပ်လို့ရသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်။ Attach လုပ်တဲ့နေရာမှာ ပထမဆုံး File ကိုရွေးပြီးသည့်နောက် နောက်ထပ် file တစ်ခုကို ထပ်ပြီး select လုပ်ဖို့အတွက် Control Key ကိုပါ အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။
Window Vista ၏ User Account Control ကို Disable လုပ်နည်း
Window Vista တွင် Software တစ်ခုကို ဖွင့်တိုင်း ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော အထက်ပါ Message Box တစ်ခု အမြဲတမ်းတက်လာသည်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ Box တက်လာရင် အတော်လေး စိတ်ညစ်မိပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး software တစ်ခုကို သုံးတိုင်းသုံးတိုင်းတွေ့နေရတော့ စိတ်ပျက်လာမိတယ်။ ဒီနေ့တော့ ဘယ်လို Turn Off လုပ်ထားတဲ့နည်းကို HowToGeek မှာ တွေ့လိုက်တော့ ပျော်သွားတယ်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်းက လွယ်ကူပါတယ်။
Control Panel ကိုဖွင့်ပါ။Top right corner မှာရှိတဲ့ search box မှာ UAC စာလုံးကိုရိုက်ထည့်ပါ။ User Accounts ဆိုပြီး တက်လာပါလိမ့်မယ်။
Turn User Account Control (UAC) or off ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး တက်လာတဲ့ page မှာ check box ကို uncheck လုပ်ပေးပါ။
ပြီးလျှင် OK ပေးပြီး restart လုပ်ပါ။
စက်ပြန်တက်လာတဲ့အခါ Software တွေဖွင့်တိုင်း ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာကောင်းသော permission တောင်းတဲ့ UAC Box ကို တွေ့ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
UK မှာရှိတဲ့ University ထဲမှာ Ranking အရ 1 to 10 အတွင်းမှာရှိပြီး ဆေးပညာ နှင့် ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေ သင်ကြားတဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။
Johnny Chatterton, Campaigns Officer (Burma Campaings UK) ရဲ့စာကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Dear Friends,
EDM 343 calls for all the release of Aung San…
အရိုးရဲ့ အာရှလူလည် သီချင်းခွေထဲက သီချင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျန်တဲ့သီချင်းလေးတွေလည်း အရမ်းကောင်းတယ်။ ဒီတစ်ပုဒ်ကတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး၊ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အာရှသားတွေအတွက်ပေါ့ဗျာ :)
Credit to : ဘွားတော် :P
Rဇာနည်ရဲ့ နောက်ထွက်မည့် စီးရီးထဲက ကြယ်ပုံပြင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ အားလုံး နားထောင်ဖူးပြီးသားလည်း ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါ။ စာသားလေးတွေလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Rဇာနည်ရဲ့ အသံနဲ့ဆိုထားတော့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလို သီချင်းကောင်း သီချင်းအေးလေးတွေဆိုရင် ဘယ်အချိန်မှာပဲ နားထောင် နားထောင် ရိုးသွားတယ် မရှိဘူး။ သီချင်းလေးတွေ နားဆင်ရင်း ဘ၀အမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
Credit to : လင်းလင်း
ဓာတ်ပုံ - အောင်ချမ်းလင်း
ကျန်တဲ့ပုံတွေကို ဒီနေရာမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှူ့ပါ
အကယ်ဒမီပေးပွဲအပြီးမှာ မန္တလေးကနေပြီး ဆုတွေအများကြီးရတဲ့အတွက် မန္တလေးသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာပဲ မန္တလေးနဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခုကို ဒီနေ့ကြားသိခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
မနေ့က မန္တလေး မြရည်နန္ဒာမြို့သစ်ဘက်မှာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခြေ ၂၅၀ ကျော် ပါသွားတယ်လို့ စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိရပါတယ်။ လူအသေအပျောက်ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ နွေရောက်မယ်လို့ စရုံလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဟူး ....
ဒီသတင်းအတွက် ညီလေး အောင်ချမ်းလင်း ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Burma Democratic Concern believes that the solution for the crisis of Burma is restoring democracy and rule of law. Burma Democratic Concern is embarking on flourishing democracy in Burma where everyone can enjoy the freedom of speech, press, beliefs, assembly and rule of law that emphasizes the protection of individual rights.
၆၂ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသားနေ့ကို မနေ့က Cardinal Wiseman High School 358, Greenford Road, Greenford, London, UB6 9AN မှာ စည်းကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့အနှံ့မှာရှိကြတဲ့ မွန်တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူ တော်တော်များများ စုံညီစွာ တက်ရောက်ကြတာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အပြင် လန်ဒန်ပုံပြင်ထဲက မင်းသမီးချောလေးကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
Update 1 : အပြင်ထွက်ပြီး ပန်းခြံထဲမှာ ဓာတ်ပုံခဏသွားရိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အေးတဲ့ဒဏ်၊ နှင်းကျတဲ့ဒဏ် တော်တော်ဆိုး။ Bus တွေကိုတော့ အခုထိမတွေ့ရသေးဘူး။ ကဲ ... ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်လ…